Tag: kupisa Martech Zone
Tag: kupisa kupisa
Nguva Yokuverenga: 5 maminitsi Mune ino nguva yedhijitari, iyo yekushambadzira nzvimbo yatama online. Iine vanhu vazhinji online, kunyorera uye kutengesa vatama kubva kune yavo yechinyakare nzvimbo kune yavo nyowani, yedhijitari. Mawebhusaiti anofanirwa kunge ari pamutambo wavo wakanakisa uye vanofunga nezve dhizaini saiti uye ruzivo rwevashandisi. Nekuda kweizvozvo, mawebhusaiti ave akakosha pamari yemakambani. Tichifunga nezvechiitiko ichi, zviri nyore kuona kuti shanduko yehuwandu hwekugadzirisa, kana CRO sekuzivikanwa kwayo, yava
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Hotjar inopa seti yakakwana yezvishandiso zvekuyera, kurekodha, kuongorora uye kuunganidza mhinduro kuburikidza newebsite yako mune imwechete inodhura package. Yakasiyana zvachose nedzimwe mhinduro, Hotjar inopa zvirongwa nezvirongwa zviri nyore zvisingadhuri apo masangano anogona kuburitsa ruzivo rwehuwandu husingaverengeki hwemawebhusaiti - uye oita kuti zviwanikwe kune huwandu husingaverengeke hwevashandisi. Hotjar Analytics Miedzo Inosanganisira Heatmaps - ichipa chiratidzo chekuona chevashandisi vako mabhatani, matepi uye maitiro ekutsikisa. Vashanyi Rekodhi
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi EyeQuant ndeyekufungidzira-yekuteedzera yeziso modhi inonyatso tarisa kune izvo vanoona vashandisi pane peji mukati mekutanga 3-5 masekondi. Pfungwa yacho iri nyore: mukati memasekonzi mashanu mushandisi anokwanisa kukwanisa kuona zvauri, kukosha kwako chirevo, uye zvekuita zvinotevera. EyeQuant inobvumidza kugadzirisa dhizaini peji kuona kuti ndizvo zvazviri. Heino mhedzisiro yemahara yeedu EyeQuant demo… Ndiri kufara chaizvo
Chipiri, Gunyana 13, 2011 Mugovera, July 8, 2017 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Patakavhura patsva tsamba yedu, ini ndaida kunyatsoita chinyoreso chinongedzo chinhu chikuru pane yedu saiti. Isu takawedzera chinodonhedza chikamu kumusoro kwenzvimbo uye zvave zvisingaite. Nepo isu taimbowanzo tora kunyorera kweumwe kana vaviri vanyoreri zvisati zvaitika, ikozvino isu tinowana vakawanda vanyoreri vhiki imwe neimwe. Yekushambadzira Technology tsamba yetsamba iri kukura inozivikanwa kwazvo, iine vangangoita 3,000 vanyoreri! Ndinoda kuwedzera mamwe madonhwe mashoma
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Ndichangowana katsamba kubva kune anotaurirana (zita hombe) kuYooba.com, webhu-based sevhisi iri kugadzirira kuvhura iyi Chitubu. Vhidhiyo yacho yakahwanda zvishoma asi zvirimo pane ino saiti zvinomanikidza: Yooba ndeye webhu inoenderana neB2B sevhisi yekushambadzira nyanzvi. Chinangwa chedu ndechekuita kuti zvikwanisike kuti iwe utarise kune kugona uye kubudirira. Yooba inokupa iyo yese-inosanganisira chikuva cheako dhijitari kushambadzira ruzivo. Isu tinopa kubata uye dhatabhesi